Surveying Android Users | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Surveying Android Users
Posted by Moe Thu on Feb 15, 2013 in Computers & Technology | 12 comments
All members from Mandalay Gazette,
I would like to request HElP from you.Actually,I already known Last 1 year ago.
But I only read all of your posts.Now I would like to make Survey for Android Users.
Which Applications do you want for your android devices(e.g social ,photography,news or games, etc…)?
You can tell up to 30 applications.
I hope your kindly help.
About Moe Thu
Moe Thu has written 1 post in this Website..
View all posts by Moe Thu →
ဂလိုချို့တော့လည်း … သုံးသမျှ ခေါင်းထဲပေါ်သလောက် ပျော့ရလျှင် … အဟမ်း … အဟမ်း … အဟမ်း… (သုံးပတ်ကျော်တေးပါဘူး )
1.battery Level Notification ဒါလေးက မချိမဖြစ်လိုတယ်ထင်လို့ အဲဗားရမ်းဖြစ်တယ်
2. ကဒေါ့ … AntiVirus လေးလည်း အချိန်တိုင်းရမ်းထားတယ် ။
3. မချိမဖြစ် advanced task killer လေးပေါ့ ။ လက်အားတိုင်း ထထရမ်းဖြစ်တယ် ။
4. အင်ချာနက်တုံးဘို့ web browser လေး တထုထု
5. ဂျီတော့ တုံးဘို့ … IMOလေးရော .. IM+ လေးရော …
6. ညန်မာ ရိုလေးပေါ်ဖို့တော့ frozen keyboard လေး မချိလို့ မဖြစ်ဘူးပဲ ။ တိုရီးယားချာနဲ့ တခြား ချာတွေအတွက်တော့ Linpus keyboard လေးက အတုံးဝင်ဗျန်ရော ။
7. နီးနီးဝေးဝေး တနယ်ချင်းတွေနဲ့ နောက်ပြောင်ဖို့ viber လေးလည်း တုံးပါတေးဒယ်
8. ချစ်တဲ့တူနဲ့ အလွမ်းတယ်ဖို့ FreePP လေးကလည်း မချိမဖြစ်ပေါ့ ။
9. ညက်နှာကြောင်ဖို့ … Facebook လေးကလည်း တင်ထားဦးမှ
10. ညဉ့် နက်သန်းခေါင် MG ကလူတွေနဲ့ အလာပ သလာပ ကြောဖို့ … နောက်တီးနောက်တောက်လုပ်ဖို့ FB msgr လေးကလည်း ……. ချိဦးမှ ။
11. အရမ်းပျင်းလျှင် အော်ရယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ SimSimi လေးလည်း တင်ထားဒယ် ။ ဒီကောင် အရမ်း စွာတယ် ….. ရယ်နေရတယ် တချိန်လုံး ။
ဖင်းဂါးပရင့်လည်း တုံးတယ် … camera 360ရော … ကောလ်ရကော်ဒါလည်း တုံးတယ် ။ ၀မ်းမိုဘိုင်းလည်းတုံးတယ် ။ gallery lock လည်းသုံးတယ် ။ ကောလ်ဘလော့ဂါလေးရော ၊ ဒေရှင်နရီလေးရော ၊ ဘားကုတ်ရီဒါလေးရော .. စခွင်ရွှတ်လေးရော ၊ ဂျီမဲလေးရော (ဂီမဲနှင့် အမျိုးမတော်ပါ ) … ဂိမ်းထဲမှာတော့ where is my waterရော bubble shoot ရော …… ဟိုဟာရော ဒီဟာရော ကျန်တေးတယ် .. တခြားဟာတွေရော မှတ်မိတော့ဝူးးးးးးး ခေါင်းထဲချိတာ ချရေးလိုက်ဒါ ……. :harr:
I am working at One of Mobile Company and we will upload famous applications to server
and user can easily download.
whatever, Thanks u so much for ur reply!!!
ကျုပ်ကျတော့.. TMobile ဆိုတဲ့ ပရိုဗိုက်တာမို့.. သူ့ဟာဝယ်ကတည်းက.. အများကြီးထည့်ပေးထားခဲ့တာ..
– Voice recoder
သဂျီး အဲဒီ 1stMMBrowser က ဂေဇက်ကိုဖတ်လို့ရလား။ ကျမ try ကြည့်တာတော့မရဘူး။ root မလုပ်ချင်လို့ အခုထိမြန်မာဖောင့်ဖတ်လို့မရသေးဘူး။ အဲ.. frozen keyboard ကကျတော့ အလုပ်လုပ်တယ်တော့ ။ ကိုယ်ဘာရိုက်လိုက်သလဲသာမမြင်ရတာ ၊ မမြင်ရတဲ့အတိုင်းကိုရိုက်ပြီး အီးမေးပို့လိုက်တော့ မြန်မာစာအမှန်အကန်လေးတွေ ကွန်ပြူတာပေါ်ဖတ်လို့ရတယ်။ စာမဖတ်တတ်ပဲ ရေးပဲရေးတတ်တဲ့လူတွေများရှိသလားတောင် စဉ်းစားမိတယ်။
အုိုပီကို အကျန်ပေးရရင်တော့ မြန်မာဖောင့်ဖတ်လို့ရမယ့် apps လေးလုပ်ပါလား။
ကလစ်လုပ်လိုက်ရင်.. ကော်မန့်တွေ.. ပို့စ်စာတွေဖတ်လို့ရတယ်..
There are over 150000 Android apks.
Any user installed at least 15 kinds of games to their android device.
It is game only, other social ,photography,news communicated apk will be used over 15 kinds of apk as their business relation.It is lowest performance android device.
If the good performance android device user, they used over 30 apk surely.
ှုဘာတွေရေးမိတာ လဲ မသိ။
မှားတာ ရှိရင် ဖြည့် လျော့ ဖတ်ပေးပါ။
ကျုပ်ကတော့ အလုပ်ရှုပ်လွန်းတာရော ၀ယ်မကိုင်နိုင်တာရော ကြောင့်မို့
နိုကီယာ ဘလက်အန်ဝှိုက် စခရင် နိုးဗလု့တု နိုးကန်မရာ နိုးဗီဒီယို နိုးအန်ပီသရီး
အဲ့ဂလောက် မော်ဒယ်လေးဘဲ ကိုင်ဒယ်ဗျ။ ငှဲ ငှဲ အလုပ်ရှုပ်သက်သာလှပါ၏။
ဒို့ဘုရားကဟောထားတဲ့အတိုင်း အပ္ပကိစ္စောစ ကိစ္စနည်းအောင်နေတဲ့…….
ဆမ်ဆောင်း နုတ်၂ရဲ့ ကောင်းတာလေးတွေပြောပြမယ် ဗိုက်ဘာဖုံးမြန်မာပြည်ကိုခေါ်တာ ပြတ်သားကြည်လင်တယ် အိုင်းပက်
ထက်သာတာတွေ့ရတယ် အိမ်သာတက်တာအရမ်:မြန်တယ်အဲလေ (အင်တာနက်တက်တာမြန်တယ်ပေါလာ) ဒလော့ဘောက်
ကလဲသုံးလို့ကောင်းပါ့ ဒါပေမဲ့မေးထဲကပို့လာတဲ့ ဒါ့ပုံတွေကို အိုင်းပက်လိုကော်ပီလုဎ်လို့မရပါ (အားနဲ/အားသာ)ချက်
ပို့စ်ပိုင်ရှင် … ဒီဆာဗေးက ဘာအတွက်လဲဆိုတာ ပြောဦးလေ။ မြန်မာပြည်က ရောင်းတဲ့ဖုန်းတွေမှာ လူသုံးများတဲ့ apps တွေတခါတည်းထည့်ရောင်းဖို့လား၊ apps developer အနေနဲ့ apps ရေးဖို့လား၊ ပြည်တွင်းကဖုန်းတွေအတွက်ပဲလား။ ဒါမှ ကိုယ်သုံးနေတာတွေကိုပြောရမှာလား၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ feature တွေ request လုပ်ရမှာလားသိမှာ။
ကျမလက်ရှိသုံးနေတာတွေကတော့ (google ကပါပြီးသား gmail, talk, chrome, youtube, G+ စတာတွေအပြင်)
– Play Magazine
– Easy Battery Saver
– FoxFi for tethering (Phone Data plan ကတဆင့် ကွန်ပြူတာမှာ အင်တာနက်ချိတ်ရအောင်လို့)
– RealCalc Scientific Calculator. TI-83 calculator apps ကအလကားမရလို့
– Catch Notes
– Flickr & Floto
လောလောဆယ်သဘောအကျဆုံ:က PAPAGO Soft wear ပါ
ပန်းသီးအကြောင်ပြောမယ်ဆိုရင် ပြန်လာမယ်… ခိခိ